Mandefa traikefa virtoaly People-to-People ny Bahamas
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Mandefa traikefa virtoaly People-to-People ny Bahamas
Ny traikefa ananan'ny olona sy ny olona dia mitondra mpitia mpandehandeha any an-tranon'ny Bahamians hianatra mandihy, mahandro ary maro hafa.
Nandritra ny 45 taona mahery, ny People-to-People Program dia nampifandray ireo mpitsidika amin'ny mponina amin'ny alàlan'ny traikefa namboarina.
Tsy mila miala amin'ny zava-niainana Bahamas marina ny olona satria tsy nandeha fiaramanidina.
Ny fotoam-pivoriana virtoaly dia atokana ho an'ireo vondrona akaiky kely izay mifanerasera mivantana amin'ireo mpampiantrano ao an-toerana, ahafahan'ny tena fifampiresahana sy fifandraisana marina amin'ny alàlan'ny fizarana ny kolontsaina sy ny fomban-drazana Bahamianina.
Androany, mitondra ny malala ny minisiteran'ny fizahan-tany sy sidina Bahamas ny olona-to-olona Fandaharana amin'ny sehatra virtoaly amin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra an-tserasera izay hamorona fifandraisana amin'ny fotoana tena izy ho an'ireo mpandeha hiaina ny fahaiza-mandray vahiny sy ny kolontsaina manankarena ataon'ny vahoaka Bahamianina. Nandritra ny 45 taona mahery, ny People-to-People Program dia nampifandray ireo mpitsidika amin'ny mponina amin'ny alàlan'ny traikefa namboarina nanerana ny Nosy The Bahamas.
Miakatra ny vaksiny ary mitombo hatrany ny fahatokisan-tena, dia miandrandra mandray tsara ireo mpitsangatsangana i Bahamas isaky ny misafidy ny hitsidika izy ireo. Na izany aza, ireo izay mbola tsy vonona ny hanao dia lavitra, dia ho faly amin'ny fahafantarana fa tsy mila miala amin'ny zava-niainana Bahamas marina izy ireo satria tsy nandeha fiaramanidina.